Tylenol एक NSAID वा एनाल्जेसिक छ? | चेकअप - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी समुदाय, कम्पनी चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Tylenol एक NSAID छ?
ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधी अक्सर टाउको दुख्ने, संयुक्त अस्वस्थता, र अन्य साना रोगहरू विरुद्ध रक्षाको पहिलो रेखा हो। टायलनॉल (एसिटामिनोफेन) र नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडीहरू) ओटीसी औषधी हो जुन हल्का देखि मध्यम दुखाइ र पीडाको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एनएसएआईडीले केवल कम गर्ने वा दुखाइको भावना हटाउने मात्र होइन तर उनीहरूले सुजनलाई कम गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू एसेटिनोफेनको ब्रान्ड नाम, Tylenol एक NSAID हो वा हैन भनेर अस्पष्ट छन्। टायलनोल एक एनाल्जेसिक (पीडा निवारक) हो तर एंटी-इन्फ्लेमेन्टरी होईन, त्यसैले टाइलेनललाई एनएसएआईडी मानिदैन।
टायलनोल र एनएसएआईडी, उनीहरूको साइड इफेक्ट, र जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुने विभिन्न प्रकारका पीडाको लागि उत्तम हो बिचको भिन्नताका बारे थप जान्नुहोस्।
कुन जन्म नियन्त्रण गोली मेरो लागी सही छ
एसिटामिनोफेन र NSAIDs बीच के भिन्नता छ?
प्राविधिक रूपमा, एसिटामिनोफेनले मस्तिष्कलाई पीडाको संकेतहरू शरीरको प्रभावित ठाउँहरूमा पठाउन रोक्दछ। यो ज्वरो रिडुसर पनि हो। टायलनोलमा सक्रिय घटकको अलावा, एसिटामिनोफेन असंख्य ब्रान्ड-नाम उत्पादनहरू जस्तै NyQuil कोल्ड र फ्लू, डेक्विल, अलका-सेल्टजर प्लस, र एक्सेड्रिनमा छ।
टायलनोल हल्कादेखि मध्यम दुखाइ राहतको लागि टाउको दुख्ने, मासिक पेटको, दात दर्द, र यस्तै अन्य लागि उपयोगी हुन सक्छ। एक एनएसएआईडी, आईबुप्रोफेन जस्ता, अधिक उपयुक्त हुन सक्छ यदि त्यहाँ दुखाइसँग सम्बन्धित सूजन वा सूजन छ भने। केही गठिया दुखाइ, जोड़ दुखाइ, मांसपेशी दुख्ने, कम्मर दुखाइ, र मोच एक NSAID को विरोधी भड़काऊ गुणहरु बाट लाभ उठाउन सक्छ।
कसरी सहि ओभर-द-काउन्टर दुखी रिलीभर छनौट गर्ने
जब एक ओटीसी दुखाई रिलीभर छनौट गर्दा, यो औषधीको जेनेरिक नाम जान्न सहयोगी हुन्छ र यदि यो NSAID हो भने। धेरै कारकहरूले तपाईंलाई कुन दर्द निवारक तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा समावेश छन्:
तपाईंको डाक्टरको मेडिकल सल्लाह वा तपाईंको विशिष्ट व्यायामको आत्म-मूल्यांकन
तपाईंको उमेर, तौल, चिकित्सा अवस्था, आदि।
यदि तपाईं अन्य औषधीहरू लिईरहनु भएको छ र यदि ती नकारात्मक ड्रग-ड्रग अन्तरक्रियाको कारण हुन सक्छ
औषधीको सम्भावित साइड इफेक्टहरू
तलको चार्टले विभिन्न ब्रान्ड-नाम ओटीसी ड्रगहरू, तिनीहरूका सामान्य नामहरू, र तिनीहरू NSAID हो कि रूपान्तरण गर्दछ। वयस्कहरूको लागि सामान्य खुराक सिफारिसहरू पनि सूचीबद्ध छन्। यी औषधीहरू धेरै वैकल्पिक खुराक र अतिरिक्त-शक्ति मा उपलब्ध छन्। Tylenol #3जस्ता प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स गम्भीर र दीर्घकालीन पीडाको लागि दुखाई प्रबन्धको लागि उपलब्ध छन्।
सम्बन्धित: सबै भन्दा राम्रो पेन्किललर के हो?
ब्रान्ड नाम सामान्य नाम NSAID? सामान्य वयस्क खुराक जानकारी
Tylenol एसिटामिनोफेन हैन प्रति ट्याब्लेट 5२5 मिलीग्राम
२ ट्याब्लेटहरू प्रत्येक -6--6 घण्टामा
प्रति दिन 000००० मिलीग्रामभन्दा बढी हुँदैन
एडभिल, मोट्रिन आइबुप्रोफेन हो प्रति ट्याबलेट २०० मिलीग्राम
१ ट्याबलेट प्रत्येक -6--6 घण्टा
प्रति दिन tablets ट्याब्लेटहरू भन्दा बढि हुँदैन
अलेभ नेप्रोक्सेन हो प्रति ट्याब्लेट २२० मिलीग्राम
१ ट्याब्लेट प्रत्येक -12-१२ घण्टामा
एक 8-१२ घण्टा अवधिमा २ ट्याब्लेट वा प्रति दिन tablets ट्याब्लेटहरू भन्दा बढि हुँदैन
बफरिन एस्पिरिन / एन्ट्यासिड हो प्रति ट्याब्लेट 5२5 मिलीग्राम
२ ट्याब्लेटहरू प्रत्येक hours घण्टामा
प्रत्येक २ hours घण्टामा १२ ट्याब्लेटहरू भन्दा बढि हुँदैन
बायर एस्पिरिन हो प्रति ट्याब्लेट 5२5 मिलीग्राम
1-2 ट्याब्लेटहरू प्रत्येक hours घण्टामा
२ tablets घण्टामा १२ ट्याब्लेटहरू भन्दा बढि हुँदैन
अनासिन एस्पिरिन / क्याफिन हो Mg०० मिलीग्राम एस्पिरिन र tablet२ मिलीग्राम क्याफिन प्रति ट्याब्लेट
२ ट्याब्लेटहरू हरेक hours घण्टामा
प्रति दिन tablets ट्याब्लेटहरू नाघ्नु हुँदैन
माथी धेरै जसो ओटीसी औषधि खाली पेटमा लिनु हुँदैन। प्रत्येक डोजको साथ पूर्ण गिलास पानी पिउन सिफारिस गरिन्छ। यसबाहेक, यी ओटीसी ड्रग्सले लगातार १० भन्दा बढि दिनमा कुनै पनि ओटीसी दुखाई औषधि प्रयोग गर्न चेतावनी दिन्छ। औषधि गाइड पढ्न निश्चित हुनुहोस् किनकि खुराक निर्देशनहरू फरक हुन सक्छ।
पेशेवर र एसिटामिनोफेन बनाम NSAID को विपक्ष
तपाईले सँधै स्वास्थ्य लाभ र जोखिम प्रत्येक प्रकारको औषधीसँग सम्बन्धित यसको सेवन गर्नु अघि तौल गर्नुपर्छ। तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था र अन्य औषधीहरू विचार गर्नुहोस् जुन तपाईं हाल लिइरहनुभएको छ। साइड इफेक्ट र ड्रग-ड्रग अन्तर्क्रियाहरू कुन अझ राम्रो हो निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण कारकहरू हुन्: एसिटामिनोफेन वा एनएसएआईडीहरू।
उदाहरण को लागी, तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्ट सिफारिस गर्न सक्छन् आईबुप्रोफेनको सट्टा एसिटामिनोफेन यदि तपाईं पेट अल्सरको खतरामा हुनुहुन्छ भने। यदि तपाईं हृदयघातको जोखिममा हुनुहुन्छ भने, एस्पिरिन लिनु तपाईंको लागि सही विकल्प हुन सक्छ। जे होस्, यदि तपाईं पहिले नै रगत पातलो लिदै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि एस्पिरिन खतरनाक हुन सक्छ। अर्को औषधि, अनासिनले क्याफिन समावेश गर्दछ, जुन एउटा अवस्थाको लागि सहयोगी हुन सक्छ वा हुन सक्दैन।
तलका यी प्रकारका पीडा निवारकहरूको फाइदा र विपत्तिहरू तुलना गर्नुहोस् र एक स्वास्थ्यसेवा पेशेवरलाई सल्लाहका लागि सोध्नुहोस् यदि तपाईंलाई अनिश्चित छैन भने जुन तपाईंको लागि उत्तम हो।
एसिटामिनोफेन कारण हुनको लागि एक nonsteroidal विरोधी भड़काउन भन्दा कम सम्भावना छ पेट अस्वस्थ । संवेदनशील पेट, पेट अल्सर, वा एसिड भाटा संग व्यक्ति Tylenol बनाम एक NSAID ले फाइदा लिन सक्छ।
थप रूपमा, एसिटामिनोफेन रगत पातलो हुँदैन। एसिटामिनोफेन रक्तस्राव सम्बन्धी विकारहरू वा पहिले नै रगत पातलो लिनेहरूका लागि एस्पिरिन भन्दा सुरक्षित विकल्प हुन सक्छ।
एसिटामिनोफेनको साइड इफेक्टहरू
केहि व्यक्तिहरूले एसिटामिनोफेनका साइड इफेक्टहरू रिपोर्ट गरे:
सामान्य भन्दा बढी पसिना आउँछ
बेहोश वा हल्का टाउको
समस्या भएको छ
पीलिया (छाला र आँखाको पहेंलो)
तपाईको डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कि यदि तपाई गर्भवती वा स्तनपान गराउँदा टाइलनोल र एसिटामिनोफेन युक्त उत्पादनहरुको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि केही औषधि बच्चालाई दिन सकिन्छ।
यदि तपाईंलाई कलेजोको रोग वा कलेजोको सिरोसिस छ भने तपाईंले टाइलोलन लिनु हुँदैन। एसिटामिनोफेनले तपाईंको कलेजोलाई थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ र राम्रोसँग पेशाब गर्ने तपाईंको क्षमतालाई असर गर्न सक्छ। थप रूपमा, एसिटामिनोफेनसँग मदिरा संयोजन गर्दा कलेजोको हानी वा विफलता हुन सक्छ।
एसिटामिनोफेनको प्राथमिक ड्रग-ड्रग अन्तरक्रिया आफैसँग छ। धेरै अधिक एसिटामिनोफेनले टाईलेनल विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ। केहि साइड इफेक्टमा बान्ता, भोक कम गर्नु, अत्यधिक थकान, र पेट दुखाइ समावेश छ। सावधान रहनुहोस् जब मिश्रण औषधि कि एसिटामिनोफेन, जस्तै DyQuil वा NyQuil, Alka-Seltzer, र Excedrin को साथ Tylenol समावेश गर्दछ।
एसिटामिनोफेनमा एलर्जीको प्रतिक्रिया हुन सक्छ। औषधि लिन रोक्नुहोस् र मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस् यदि तपाईंलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ वा पित्ती वा छालाहरू विकास गर्नमा समस्या आएको छ। टायलेनोलको अधिक मात्रा विषाक्त हुन सक्छ, त्यसैले सिफारिस गरिएको रकम भन्दा बढी नलिनुहोस्।
NSAIDs को फाइदा
एक नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रगले ईन्फ्लेमेसन घटाउने थप फाइदा छ। यदि तपाईं सुन्नुभयो भने, एक NSAID तपाईंको रोगको उपचार गर्न बढी उपयुक्त हुन सक्छ।
एनएसएआईडीहरू सुरक्षित, कम लत विकल्प पनि हुनसक्दछ पर्चा-शक्ति दर्द निवारकहरू, जस्तै ओक्सीकन्टिन, पर्कोसेट, र भिकोडिनको लागि। तपाईंको डाक्टरले एक सामान्य चोटपटक पछि वा शारीरिक उपचारको क्रममा निको हुन NSAIDs सिफारिश गर्न सक्दछ।
२०१ap मा नेप्रोक्सेन पनि घुँडा अस्थिरोगको लागी सबैभन्दा प्रभावशाली NSAID को श्रेणीकरण गरिएको थियो आर्थोपेडिक सर्जनहरूको अमेरिकी एकेडेमी । र, तपाईंको स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर गर्दछ, एक डाक्टरले रगतको थक्कीहरू रोक्न र तपाईंको हृदयघात वा स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न कम डोज एस्पिरिन थेरापी सिफारिस गर्न सक्छ।
यद्यपि, NSAIDs को दीर्घकालीन प्रयोग सिफारिश गरिदैन। यसले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जुन तपाईं तल बढि जान्न सक्नुहुन्छ।
NSAIDs को साइड इफेक्टहरू
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स सहित साइड इफेक्ट पैदा गर्न सक्छ तर सीमित छैन:
ग्याँस र पेट भरे
पखाला वा कब्ज
पेट दुखाइ र दुखाइ
पेट दुखाइ र ईब्प्रोफेन जस्ता NSAIDs को साथ लाग्ने ईर्ष्या Tylenol भन्दा भन्दा अधिक गम्भीर प्रवृत्ति हुन्छ। अल्सर हुन सक्छ। जठरांत्र रक्तस्रावको लागि बढेको जोखिम पनि NSAIDs को सम्भावित साइड इफेक्ट हो, विशेष गरी जब एस्पिरिन प्रयोग गर्दा।
चिकित्सा अवस्था जस्तै किडनी रोग वा कलेजोको रोगले NSAIDs प्रयोग गर्नबाट जोगिनु पर्छ। थप रूपमा, NSAIDs को साथ रक्सीको संयोजन जठरांत्र रक्तस्रावको तपाईंको जोखिम बढाउन सक्छ।
NSAIDs ले पनि एकको रक्तचाप बढाउन सक्छ। ओटीसी एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लिनु अघि तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईलाई उच्च रक्तचाप छ वा यदि तपाईलाई जोखिममा छ वा हार्ट अटैक वा स्ट्रोक छ। एस्पिरिन एक मात्र NSAID हो जसले हार्ट अटैक, स्ट्रोक, र रगतको धककनको जोखिम कम गर्दछ।
थप रूपमा, NSAIDs गर्भावस्थामा प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याउन सक्छ, जस्तै गर्भपतनको जोखिम, को अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको चिकित्सा पुस्तकालय । त्यहाँ धेरै जोखिमहरू समावेश छन् जब गर्भावस्थामा औषधी लिने , त्यसैले गर्भवती हुँदा पीडा औषधी लिनु अघि आफ्नो चिकित्सकको परामर्श गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
यदि तपाईलाई सास फेर्न, घरघराही, छातीमा जकडिएको, वा छालाको दाग लाग्ने समस्या छ भने तपाईले एनएसएआईडीको एलर्जीको सामना गरिरहनु भएको हुन सक्छ। तुरुन्त औषधि लिन रोक्नुहोस् र पेशेवर चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस्।
सूर्य संवेदनशीलता बढाउने औषधीहरूमा प्रकाश बहाउँदछ
जब डेपो शट मा किक हुन्छ?
कानको दुखाईको लागी म के गरुँ?
इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लागी कुन जडी बूटीहरु राम्रो छन्?
के nabumetone 750 मिलीग्राम ट्याब्लेट को लागी प्रयोग गरीन्छ
छाला मा खमीर संक्रमण को लागी होम्योपैथिक उपचार